Abiy Ahmed Ali(Abiyot Kasaye Belayneh) fi Shimelis Abdisa Oromoota naannoon qoodanii hidhuutti jiru. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAbiy Ahmed Ali(Abiyot Kasaye Belayneh) fi Shimelis Abdisa Oromoota naannoon qoodanii hidhuutti jiru.
#Tokkummaa-Mootummaan Abiy fi Shimallis Oromoota naannoon qoodanii hidhuutti jiru.
Yeroo ammaa pirojeektii qoqqoodinsaa kana milkeessuufis horii guddaa ramadamee hojjatamaa akak jiru beekameera.
Keessaayyuu, mootummaa Cundhuuraa hogganaa kan jiru Shimallis Kalaadaa, ijoollee Oromoo naannoo lixaa, kibbaa, bahaa fi kaabaa irraa gara giddua aleessaa dhufan waraqaa eenyummaaa isaanii ilaaluu qofaan akka diinaatti ramadanii hidhaa jiru.
Gochaan badaa kun, keessaayyuu, Burraayyuu, Sabbataa, Aqaaqii, Bushooftuu, Galaan, fi Adaamaa fa’aa keessatti hammaatee jira.
Ijoolelen Oromoo naannoo Burraayyuutti hidhamanis dhiittaan mirga namoomaa guddaa irra gahaa akka jiru beekameera. Sababa kanaan Oromoonni naannoo biraa iraa gara giddugaleessaatti dhufan akka diinaatti ramadamuun hidhaa fi dararaaf saaxilamaa jiru.
Gochaan kun guutummaatti pirojeektii nafaxanyooti baafatanii, Oromoo addaan qoqqooduuf itti hojajchaa jiranii dha. Waan ta’eef, sabni keenya akkuma kanaan duraatti tokkummaan dhaabbatanii gochaa farrummaan guutame kana akka fashaleessan sabboontonni dhaamanii jiru.
Gochaa badaa kana keessatti kanneen otuu hin hubatiin hirmaataa jiranis harka isaanii yeroon akka keessaa baafatan sabboontonni Oromoo dhaamanii jiru.
Oromoon waliin gabrummaatti kufe waan ta’eef, walgargaaree gabrummaa keessaa bahuu irratti akka hojjachuu qabus dhaamamee jira.
#Oromoo #Oromia #Bilisummaa #Tokkummaa